6 fikradood oo lagu qurxiyo quraaradda | Ee kalluunka
Waxaa jira a qurxinta badan oo ah fikrado aad u fiican oo lagu qurxiyo quraaradda, laga bilaabo dhagaxyada ama ulaha ilaa tirooyinka caadiga ah ee laabta iyo noocyo kala duwan leh ama ka sii mala awaal badan, sida cananaaska oo uu ku nool yahay SpongeBob.
Si kastaba ha ahaatee, Kaliya maahan xulashada qurxinta aan ugu jecel nahay quraaraddayada, laakiin sidoo kale ku saabsan ogaanshaha kuwa aynaan gelin karin, iyo waliba ogaanshaha sida loo nadiifiyo iyaga iyo talooyin ku saabsan qurxinta. Waxaas oo dhan waxaan ku dabooli doonaa maqaalkan. Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso qoraalkan kale ee ku saabsan qurxinta gunta aquarium-keena haddii aad rabto fikrado badan.
1 Fikradaha lagu qurxiyo quraaraddaada
1.1 Quruurux ama ciid
1.3.1 Dhir dabiici ah
1.3.2 Dhirta dabiiciga ah
1.5 Qurxinta macmalka ah
1.6 Warqad qurxin ah
2 Waxa aan lagu shubin quraaradda
2.2 Waxyaabaha dabiiciga ah ee aan la daaweyn
2.3 Qurxinta aan la diyaarin
3 Sida loo nadiifiyo qurxinta
4 Talooyinka qurxinta
Fikradaha lagu qurxiyo quraaraddaada
Shaki la'aan, qurxinta quraaradda waxay noqon kartaa mid ka mid ah hawlaha ugu xiisaha badan, maaddaama aan iftiimin karno aragtida quraaraddayada oo aan ka eryi karno inay tahay meel fudud oo leh afar quruurux iyo warshad caag ah oo engegan. Taa bedelkeeda, suuqa waxaan ku leenahay fursado badan:
Quruurux ama ciid
Dehner - quruurux ...
Maqaarka Croci A4022043 ee ...
Aasaaska quraaradda kasta, macno ahaan, waa quruurux ama ciid, oo la dul dhigay. In kasta oo quruuruxdu ay ku timaaddo qaab dhagaxyo ah (oo leh muuqaal dabiici ah ama midab leh, iyo cabbirro kala duwan), ciiddu waxay ku habboon tahay kalluunkaas oo u janjeera inay isku aasaan ama inta badan waqtigooda ku qaataan xagga hoose ee deegaankooda. , sida cirifka.
Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood quruurux ayaa ah xalka ugu fiicangaar ahaan raaxadeena. Tusaale ahaan, mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn ee ciiddu waa nadiifinta oo aad u culus, iyo inay meel walba gaadho, markaa waa inaad baddashaa baddelkeeda.
Sidoo kale, waxaa aad loogu talinayaa inaad doorato agabyada dabiiciga ah, maaddaama ay yihiin dardaro ama galaas ma oggolaan doonaan in bakteeriyada wanaagsan ee bakteeriyadu (xusuusnow, muhiim u tahay quraaradda) inay si fudud u soo baxdo.
Qurxinta Hygger ...
Qurxinta Nobby ee loogu talagalay ...
Nobby, Dhagaxa Qurxinta ...
Haddii aad rabto inaad siiso aquarium -kaaga taabasho rustic ah, waxaad dooran kartaa diiwaannada. Waxaa jira jirrido badan oo been abuur ah oo indhashareerka lagu xidho dukaamada xayawaanka ama Amazon oo si fiican ugu dayana dabeecadda, iyo, marka lagu daro, inay yihiin kuwa dardaro leh ma qudhmiyaan, sidaa darteed waxay siin karaan hoy aan xad lahayn kalluunkaaga.
In kasta oo ay suurtogal tahay in qoryo dabiici ah lagu dhex isticmaalo quraaradda quraaradda ah, waa inaad aad u taxaddartaa, maadaama ay tahay arrin aad xasaasi u ah. Noocyada qoryaha qaarkood, tusaale ahaan, waxay sii daayaan aashito biyaha ku dili kara kalluunkaaga. Badankood way sabeeyaan, markaa waa inaad marka hore daaweysaa ama aad ku dhajisaa xagga hoose dhagax, tusaale ahaan. Sidaa darteed, laguma talinayo inaad isticmaasho alwaax aad adigu iska soo ururisay, adigoon wax ka ogaanin noocyada kala duwan oo aan ku xisaabtamin haddii ay isticmaaleen sunta cayayaanka.
Dhirta gariirka ...
Dhirta Iyagu waa mid kale oo ka mid ah fikradaha caadiga ah ee lagu qurxiyo quraaradda. Waxay noqon karaan kuwo macmal ah ama dabiici ah, sidaan hoos ku arki doonno.
Dhir dabiici ah
Shaki kuma jiro iyagu waa kuwa ugu fudud ee la daryeelo (asal ahaan sababtoo ah uma baahna daryeel). Intaa waxaa dheer, waxay u muuqdaan inay leeyihiin midabyo midab badan leh waxayna hoy siiyaan kalluunkaaga iyagoo aan ka baqayn inay si xun u saameeyaan caafimaadkooda. Waxaa intaa dheer, ma dhintaan mana qudhmi karaan, taas oo walxo ku sii dayn karta biyaha kor u qaada heerka nitrogen, taas oo culays gelin karta oo kalluunkaaga xanuunsan karta.
Dhirta dabiiciga ah
In kasta oo aan si weyn loogu talin bilowga, dhirta dabiiciga ahi waxay kaloo leedahay faaidooyinkeeda. Tusaale ahaan, si fiican loo daryeelay siidaynta oksijiinta marka la isticmaalayo CO2, wax mar walba aad loogu taliyo kalluunkaaga (xusuusnow inay u baahan yihiin ogsijiin si ay u noolaadaan). Si kastaba ha noqotee, markaad iibsaneyso dhirta dabiiciga ah hubi inay ku yimaadaan weel madhan si aadan u helin marin -haweedka, sida snails, oo ku soo duuli kara quraaraddaada.
ARKA Biyaha ...
Dhagaxyada, sida qoryaha, waa mid ka mid ah kuwa qadiimiga ah ee lagu qurxiyo quraaradda. Waxaad ka heli kartaa meelo badan oo, kiiskan, adeegsiga dhagxaanta dabiiciga ahi ma aha mid khatar u ah kan qoryaha. Weli, si aad u hubiso inay ammaan yihiin in la isticmaalo, ku qoy biyo dhawr maalmood ka dibna hubi in pH aysan is beddelin.
Tijaabo kale oo lagu hubinayo in dhagaxa aad u dooratay quraaraddaada aysan ku jirin asiidh dila kalluunkaaga, si ka dhakhso badan, waa ku shub khal dhagaxa. Haddii aadan waxba samayn, dhagaxu waa ammaan. Dhinaca kale, haddii ay xumbo yeelato, waxaa ku jira asiidhyo, markaa waa inaadan ku darin quraaradda. Baaritaankan waxaa kale oo lagu samayn karaa aashitada hydrochloric, laakiin aad bay uga khatar badan tahay (waxaan kaaga sheegayaa waayo -aragnimo: walaashay oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga juqraafi, mar qura ayaa ka tagtay dhalo biyo ah oo aan ku dhowaaday inaan dhinto).
Qurxinta macmalka ah
Qurxinta macmalka ah waxaa lagu iibiyaa meelo badan oo, ugu fiican oo dhan, waxay si buuxda ugu diyaarsan yihiin in la quusiyo, markaa maahan inaad ku xanuunsato kalluunkaaga. Oo hadday taasi ku filnayn, soo bandhiga noocyo kala duwan oo la yaab leh oo ah figurines, inta badan ka mid ah kuwa ugu caansan (noocyo kala duwan, sanduuqyada khasnadaha, maraakiibta quustay, koofiyadaha quusitaanka, burburka, dhismayaasha bariga, Buddhas ...) ilaa kuwa khiyaaliga ah (Stonehenge, cananaaska SpongeBob, Star Wars AT-AT, volcanoes, boqoshaada, qalfoofka ...).
Warqad qurxin ah
Boodhka asalka ah
Taariikhda Boodhka Balacoo ...
Haddii aad rabto inaad siiso aquarium -kaaga xoogaa qoto dheer, waraaqaha darbiga ayaa xal ah. Dhab ahaantii lama rinjiyeeyo, laakiin waa sawir daabacan, badanaana ku dhegsan warqad dhegdheg leh, oo aad ku dhegi kartid gadaasha quraaradda (sida iska cad bannaanka). Badiba waxay u qaabeysan yihiin sida badda, in kastoo aad sidoo kale heli karto kuwo badan oo asal ah oo leh kaymo, biyo -dhacyo ... Xitaa haddii aadan heli karin wax sawirro ah oo aad jeceshahay, waxaad dooran kartaa inaad mid daabacdo. Waxaa aad loogu talinayaa in kiiskan aad dahaadho, maadaama, xitaa haddii ay ka baxdo biyaha, ugu dambayntii way qoyan doontaa
Waxa aan lagu shubin quraaradda
Mid baa jira qalab taxane ah oo aan lagu talinaynin in biyo lagu shubo, sida aan hoos ku arki doonno, iyo in laga yaabo in lagugu jirrabo in aad quusto. Tusaale ahaan:
Madowgu waa qurux, laakiin inta badan waxaa ka buuxa sun iyo bakteeriya taasi waxay burburin kartaa nidaamka deegaankaaga badda. Intaa waxaa dheer, shacaab dhintay waxay leedahay midab midab leh oo aad u fool xun, wax liita, sidaa darteed had iyo jeer waxay ku sii fiicnaan doontaa inaad doorato ikhtiyaar macmal ah laakiin aad u qabow oo ka farxiya isha.
Waxyaabaha dabiiciga ah ee aan la daaweyn
Kahor intaanan ku siin xoogaa fikrado ah si aad u daweyso qoryaha iyo dhagxaanta dabiiciga ah ee aad rabto inaad ku darto biyaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan hubin oo aad ku cusub tahay arimahan, waxaa fiican inaad u tagto dhagxaan macmal ah iyo ulo.
Qurxinta aan la diyaarin
Hindida caagga ah waxay ku noqon kartaa mid aad loogu jecel yahay quraaradda biyahaaga, laakiin waa inaad ogaataa inaysan ahayn qurxin lagu daaweeyo in lagu quusiyo biyaha, markaa waxay sun u noqon kartaa kalluunkaaga iyo dhirtaada. Wax la mid ah ayaa ku dhaca “qurxinta” kale ee aadan daaweynin ama aan loogu talagalin sidaas oo kale, tusaale ahaan, qadaadiicda, macdanta, galaaska rinjiga ...
Sida loo nadiifiyo qurxinta
Had iyo jeer, sida muuqata, waa inaad nadiifisaa qurxinta aad ku haysato quraaraddaada. Wixii loogu talagalay:
Marka hore, algae nadiif ah iyo dhir macmal ah inaad ku dhex jirto quraaradda biyaha adigoon biyaha ka saarin iyo burush. Ha noqon mid aad u qallafsan haddii aadan rabin inaad kor u qaaddo.
Ka dib, ku nadiifi quruuruxa xagga hoose faaruqin quruurux. Qaabkan ma aha oo kaliya inaad ku nadiifiso dhagxaanta, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho beddelka ama buuxinta biyaha.
By habka, haddii aad nadiifisid qurxinta gudaha, ha isticmaalin burush aad u adag haddii aadan rabin inaad xoqdo figurines -ka.
Xitaa haddii ay yihiin dhowr tallaabo oo aad u fudud, runtu waxay tahay inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu shaqada badan marka laga hadlayo dayactirka quraaradda, laakiin aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo nadaafadda wanaagsan.
Ugu dambayn maxaa quraaraddaadu waa qabow ama sida isku -dhafka oo leh kun shay oo aan kalluunka xitaa la arag kuma xirna kaliya lacagtii aan qarashgareyney ama xaddiga sawirrada aan dhignay. Tusaale ahaan:
Tixgeli bannaan maxaad haysaa oo maxaad rabtaa inaad dhigto (dhir dabiici ah ama dabiici ah, tirooyin ...)
Hadday tahay enidaamka badda, dulucda baddu way fiicnaan doontaa, halka haddii ay tahay biyo macaan, webi.
Ka fikir nooca quruurux ama ciid ku habboon kalluunkaaga.
Ha isku darin alaab badan haddii aadan doonayn inaad culays saarto kalluunkaaga ama aad haysato quraaradda oo aad u buuxda. Dhirta dabiiciga ahi waxay kaloo u baahan tahay meel bannaan.
Tixgeliyey ku dar curiye leh godad meesha kalluunku ku dhuuman karo.
Hal saami oo si fiican u shaqeeya ayaa ah inaad doorato inaad dhigto gabal weyn oo dhexda ku yaal iyo labo ka yar oo dhammaad ah.
Waqti ka waqti waa Waxaa lagugula talinayaa inaad u guurto sawirrada iyo qurxinta hoose ee quraaradda (sida iska cad tani ma khuseyso dhirta dabiiciga ah) si aad u siiso noocyo kala duwan naftaada iyo kalluunkaaga.
Waxaan rajaynaynaa in fikradahaas lagu qurxiyo quraaradda quraanka ay u noqdeen hage si aad u noqoto mid qabow. Noo sheeg, waligaa ma qurxisay quraaradda biyaha mise waxaad dareentaa inaad luntay? Miyaad ka badan tahay dhirta dabiiciga ah ama kuwa macmalka ah? Ma jiraa qurxin aad si gaar ah u jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » 6 fikradood oo lagu qurxiyo quraaradda